Namoota galmee Barsiisaa Gurmeessaa Ayyaanoo irratti himannaan wal fakkaataan irratti dhiyaatee ture 22 keessaa 21 ka gad-lakkifaman yoo tahu Dargaggoo Darajjee Margaa hin hiikamiin hafuun ni yadatama. Guyyoota hanga tokko dura immoo dhaddacha jeeqxe jedhamuun hidhaan baatii torbaa irratti muramuun ni yaadatama.
Barsiisaa Drajjeen Robii kaleessaa mana murtii duratti ka deebi’ee dhiyaate yoo ta’u himannaa galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti ittiin himatamee irraa waan hafeetu jira jechuun erga harki isaa to’annaa jala oolee jalqabee hidhaa waggaa afuriin akka adabamu itti muramee jira.
Darajjee Margaa gubachuu mana hidhaa Qilinxoo dhimma wal-qabateenis himatamee mana murtitti deddebi’aa jira.
Gama kaaniin immoo Dirree Dawaa irraa kan qabame Tuujii Baareentoo nama isa waliin himata wal fakkaataa qabu biraa adda baafamee hidhaan waggaa 11 fi baatii 7 irratti muramuu Abukaatoon isaa ibsanii jiru.
Nama himata wal fakkaataa galmee tokko irraa qabu irratti murtii adda addaa kennuu kana seerrii biyyatti attamiin ilaala?
Oolmaa dhaddacha kaleessaa maal akka ture Abukaatoo Obbo Wandimmuu Ibsaanii jiru. Caqasaa